Ndị na-eweta nri akpọnwụwo na ụlọ ọrụ - Ndị na-emepụta nri akpọnwụwo nke China
Agba dị ụtọ, ihe na-edozi ahụ bara ụba.Nri ụtọ dịtụ nnu Nzube Nwunye akwa noodles a na-emeju ọtụtụ nri ndị Eshia gụnyere esi na nsị fry. Nwee isi akwa ahụ.Efrata ntụ ọka wit, akwa ntụ ntụ, mmiri, nnu na-eje ozi aro Mere nke oke àgwà ntụ ọka ka mma, tọrọ ụtọ na ukwuu nutritious.Mgbe e were ya, mbụ ọ na-achọrọ na-akpali-akpali-ịghe ihe ruo mgbe ya esighe.Tinye condiments na ụfọdụ ofe na mgbe ahụ. tinye na noodles, ghee ma sie ya dum maka 2-3mi ...
Agba dị ụtọ, ihe na-edozi ahụ bara ụba.Nri ụtọ dịtụ nnu Nzube noodles esi nri ngwa ngwa na-emeju ọtụtụ nri ndị Eshia gụnyere isi na nsị.Efrata ntụ ọka wheat,mmiri,nnu na-eje ozi aro Mere nke oke àgwà ntụ ọka ka mma, ụtọ na ukwuu nutritious.Mgbe e were ya, mbụ ọ na-achọrọ na-akpali-ịghe ihe na-ighe ruo mgbe ya esighe.Tinye condiments na ụfọdụ ofe wee tinye n'ime ya. noodles, ghee ma sie ihe niile maka nkeji 2-3 ma jee ozi.N...
Mpempe agwa akpọnwụwo/akpọnwụ agwa
Agwa ngwaahịa tofu mkpịrị osisi agwa mkpịrị amị Gịnị bụ mkpisi agwa agwa?Osisi bean curd bụ ngwaahịa nri sitere na agwa soy.A na-akpọkwa ya dị ka Tofu Stick, Tofu Skin, Yuba, Fuzhu, Bean Curd Stick, wdg. A na-ejikarị ya eme ihe na nri Chinese & Japanese.O juputara na ísì agwa ma nwee protein na ihe ndị ọzọ na-edozi ahụ, dị ka calcium, iron.Ọ dịghịkwa cholesterol.Nkọwa Ihe Ngwa agwa curd osisi, Fuzhu, Yuba, Agba curd agwa & Luster Pale Yellow na eke l ...
ero Shiitake akpọnwụwo
Mushroom Shiitake akpọnwụ akpọnwụ Nkọwa N'ogbe kacha mma ọnụahịa dị elu nke akpọnwụ akpọnwụ shiitake oge niile n'afọ gburugburu Asambodo HACCP/ISO/BRC Nkwakọba 1.5kg/ aluminum foil bag Shape Pụrụ iche Ọdịdị onwe ndụ 12 ọnwa mbukota Dị ka ndị ahịa 'chọrọ Mmalite Fujian ọma mbupụ mba USA, Canada,Europe, Israel, na wdg. Agba gbara ọchịchịrị nha nha 2-3, 3-4, 4-5, 5cm na elu Shelf Life 2 afọ Ọkwa A, B, C, D Umi ≤12% mbukota 3kg/vacu.. .
Nkọwa N'ogbe kacha mma ọnụahịa dị elu nke ero akpọnwụ akpọnwụ oge niile afọ gburugburu Asambodo HACCP/ISO/BRC Mbukota 50g/akpa x 100/katọn 100g/akpa x50/katọn 1kg/akpa x 10/katọn 10kg/12/kg/18/kg katọn Otutu Ọdịdị Pụrụ Iche Ndụ Ndụ ọnwa 18 Origin Fujian nke ọma mbupụ mba USA, Canada,Europe , Israel na Japan Usoro ịkwụ ụgwọ 30% T / T tupu oge eruo, 70% nguzozi ugwo megide oge nnyefe B / L N'ime 14-21 ụbọchị mgbe ị nwetachara. L / C ma ọ bụ nkwụnye ego P ...